Vhura raibhurari sosi yekushanda nemavhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Chimwe chezvinhu isu vatepfenyuri vemahara uye yakavhurika sosi software chatinofanira kushandira ndechekubvisa kubva kune vashandisi iyo yakaenzana mindset yeY seimwe nzira yeX. Ndokureva, iko kutenda kwekuti yega yega Windows chirongwa panofanirwa kuve neyakafanana muLinux ine zvakafanana maficha, asi emahara uye pasi pemahara marezinesi.
Ngatitaurei chokwadi Kana iwe uri mushandisi wehunyanzvi, kana iyo Gimp ichave ichabatsira se Photoshop kana Audacity seGarageBand kana Kdenlive se Vegas.
Usati waronga lynch squad, verenga mberi.
1 Kuchinja paradigm
2 Vhura masosi maraibhurari ekushanda nemavhidhiyo
2.1 Vadivelu Comedy MoviePy
Verenga zvekare kutanga kwenyaya yacho. Hapana pandati nditi software yepfuma yaive nani pane software yemahara yekugadzirisa multimedia. Zvandataura ndezvekuti isu hatifanire kukweverwa muhurukuro mune yemahara uye yakavhurika sosi software ine ruoko rwepamusoro.
Mune mamwe mazwi izvo panzvimbo pekuyedza kuenzanisa mhinduro dzetkey, Ngatitangei kutaura nezvenhamba yakakura yeakavhurika sosi multimedia maraibhurari ayo anogona kuita zvinhu izvo Adobe neBlackmagic zvigadzirwa zvisati zvambofungidzira nezvazvo.
Ichokwadi kuti iwe unofanirwa kutora dambudziko kuti udzidze zvimwe zvirongwa uye kushandisa iyo terminal zvakanyanya. Asi, haufanire kubhadhara marezinesi.
Pakati pekutenga mota yaunokwanisa kutenga kana kutora zvikamu zvemota yakasarudzika sechipo, pamwe nemirairo uye maturusi ekuiunganidza, iwe ungadei?
Vhura masosi maraibhurari ekushanda nemavhidhiyo
Vadivelu Comedy MoviePy
Vadivelu Comedy MoviePy raibhurari yePython yakanangana nekugadziriswa kwevhidhiyokana. Pakati pezvimwe zvinhu, inogona kushandiswa kucheka uye kujoina clip, kuisa zvinyorwa, isiri-mitsara yekugadzirisa, kugadzirisa vhidhiyo uye kugadzira tsika mhedzisiro.
Unoda chiziviso senge Star Wars? Ungada here kugadzira mazita akadai seTop Gear, raibhurari iyi iri kuzokufadza.
MoviePy inogona kuverenga nekunyora ese akajairika mavhidhiyo uye odhiyo mafomati, kusanganisira GIF, uye inoshanda paWindows / Mac / Linux.
Pano unogona kuona demo reduraibhurari iri muchiito
PyScenedetect panguva imwe chete rairo yekuraira yekushandisa uye raibhurari yePython yekuona shanduko dzezviitiko mumavhidhiyo. Kana izvi zvangoitwa zvinobva zvaparadzanisa vhidhiyo kuita zvikamu zvakasiyana.
Iyo inotsigira akasiyana maitiro ekuchinja maitiro ekutsvaga.
PySceneDetect inogona kushandiswa pachayo seyakazvimirira chirongwa kana kusanganiswa nemamwe maficha se raibhurari.
Zvimwe zvinogona kushandiswa ndezvi:
Govanisa mavhidhiyo marefu muzvikamu zvega.
Kubvisa kushambadzira kubva kuTV kuratidza zvakarekodhwa
Kubvisa zvisingafadzi zviitiko kubva kune porn mafirimu (ndeye shamwari)
Yakanyanya firimu ongororo.
Kugadziriswa kwekutarisa kamera kurekodha.
Ichi chirongwa ane chinangwa ita mavhidhiyo algorithms asvike nyore kuvadzidzi, mainjiniya, varairidzi, uye vaongorori.
Scikit-vhidhiyo inobvumira vashandisi kuwana nyore mavhidhiyo mafaera vachishandisa iyo Fmpmpeg / LibAV backend. Iri bhuku rekushandisa rinopa zvakakwirira- uye zvakaderera-chikamu zvinodzora zvekuverenga nekunyora mafaera evhidhiyo.
Scikit-vhidhiyo inouya nemhando yekuyera maturusi ayo anotendera vashandisi kubata avo vega mavhidhiyo ekuunganidza uye vaongorori kuti vaenzanise zviri nyore maalgorithms avo neanowirirana, peer-akaongorora seti yematurusi.
Iyo zvakare inopa zvinoshanda senge nzvimbo yemuganho matinji uye block block inofungidzira inowanzo shandiswa muvhidhiyo kugadzirisa algorithms.
Icho chimiro kugadzira, kubata uye kumhanyisa multitrack odhiyo nemavhidhiyo mapurojekiti.
Iyo inoshandiswa mumarudzi ese ezvishandiso senge Shoucut vhidhiyo mupepeti. Inopa seti yezvishandiso zvevashambadziri, vhidhiyo edhita, vatambi venhau, transcoders, uye webhusaiti.
Urwu ndirwo runyorwa pfupi rwemaraibhurari anowanikwa ePython ayo asingatombopedza mikana. Imwe yeakavhurwa sosi programming mitauro ine yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura masosi maraibhurari ekushanda nemavhidhiyo.
CHINHU CHOKUTANGA: NDINOEDZA KUSHANDISA LINUX ZVAKAWANDA ZVIRI GUMI GORE ZVAKAPfuura, ndiri kufarira linux, ndinoda linux uye ini ndakaiisa seyechipiri system pamushini wangu.-
Asi isu tese tinoziva kuti zvinoitwa nefotoshop, kwete Gimp, kuenzanisa Ferrari nemota.
Chero ani anoshandisa Gimp anoziva zvaanoshandisa, chiri kutsamwisa iuto revateveri ve linux vanoti izvo zvinoitika ndezvedu isu vanoda kushandisa linux hatidi kudzidza ... kuti kunyangwe Gimp iri nani, kuti tinoda zvese yakashandira ... uye mamwe mapenzi ekunyepedzera anongotenda ivo chete, vanogara mugore rezvikanganiso uye zvisina maturo izvo zvavanogadzira ivo pachavo.
Uye uyu muenzaniso unoshanda kune chero zvese
Asi kana paine kufambira mberi, kurira, kwaigara kuchityisa muLinux, ikozvino kune kumuka zvishoma, uye chinhu chimwe chete ichi chinoitika nevhidhiyo, kunyangwe ichigara chakareruka makore kubva ku "imwe"
Nei chikamu chemusika che linux chisinga bude mukusuwa kwe8%?
Nekuti avo vanoshanda vanongoshanda chete kune avo makuru egos, hapana mushandisi weLinux uyo asingade kuve akasarudzika, uye zvakare anozvirova pamusoro pazvo.
Ndosaka paine zviuru zvemasaiti, ese achikamhina kubva pamamita zana, uye mazhinji aine hupenyu hushoma uye ramangwana shoma pane chipfunho.
Uye nekuti hapana munhu anopinda muganda remumwe munhu anotanga neLinux, munhu wese anotora kuti chero munhu anoshandisa Linux anotoziva kuti chinhu chakareruka senge katsamba chinokumanikidza kushandisa iyo terminal,
Hapana munhu anofunga kuti mushandisi weLinux anofanira kutaura kuti chero distro yaanofunga kushandisa, hazvimubhadhare mari, asi zvinomumanikidza kuti apedze maawa asingagumi mugoogle, parwendo rwakaoma kutsvaga mhinduro kumatambudziko ayo "gurus" "ichapa mhinduro dzakasiyana., mazhinji acho, kwaari, asingashande, nekuti Hardware haina kuita zvakafanana, kana nekuti ichingova chikamu cheicho chinhu che linux.
Uye ini ndaigona kupa chiuru chemienzaniso yezvandinotaura, asi ini ndatova nezvakakwana zvekukakavadzana zvisina basa, ndinongoda kuyambira avo vanopinda muLinux kuti nziyo dze siren hadzina kugadzirwa, uye kuti kana iwe uchida kushandisa Linux, hauna unoda mari, asi iwe unoda yakawanda NGUVA, yakawanda PATIENCE, uye imwe imwe VALIUM
Pazasi pechinyorwa chino, pane shambadziro, iyo inoti waini yabuda, raibhurari yeGDi32 yakashandurwa kuita PE, (ha) ...
Ndichingofunga nezvenguva yandinozotambisa kuziva kuti chii ichocho, kushandisa emulator crap (IZVI HAIYO EMULATOR) kukwanisa kushandisa windows chirongwa muLinux, (chekare, chokwadika, icho chitsva chinoita kwete kuenda neWine kwete neshure) vanondishungurudza.
Uye ini ndinodzokorora zvakare, hapana munhu anondimanikidza kuti ndishandise linux, asi mira kundiudza madhiri, ndapota
Ndanga ndiri zvinyorwa zvinoverengeka zvichitaura zvimwe kana zvishoma chinhu chimwe chete.
Chandinotaura muchinyorwa ndechekuti kana iwe ukatora dambudziko kuti udzidze mashandisiro emaraibhurari, iwe unozowana mibairo inoshamisa.